Puzzles, Pinda uye unakirwe kubva kuEmulator.online
Ongorora: kutamba nharembozha tenderera iyo skrini
Mapipi. Pazasi isu tinokuratidza zvese zvaunoda kuti unzwisise uyu mutambo wakanaka. Kubva pane zvarinoreva, kwayakatangira, mabhenefiti ayo, mhando dzemapuzzle aripo uye nemazano ekugadzirisa nekukurumidza.
Puzzles: Maitiro ekutamba nhanho nhanho 😀
Kugadzira a dambanemazwi online mahara, iwe unongofanirwa kudaro tevera iyi rairo nhanho nhanho:
2 danho. Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watove kuratidzwa pachiratidziri. Unofanira chete rova kutamba uye iwe unogona kutanga kusarudza iyo dambanemazwi yaunonyanya kufarira. Unogona kusarudza mufananidzo waunofarira zvakanyanya, uye mushure mekuisarudzaIwe unogona zvakare kusarudza iyo nhamba yezvidimbu iyo iyo pikicha ichave iine.
4 nhanho. Gadzira zvidimbu zvese pamwechete nenzira yekuti mufananidzo wawakasarudza ugadzirwe.
5 nhanho. Mushure mekupedza mutambo, tinya "Tangazve" kuita mamwe mapuzzle.
Chii chinonzi dambanemazwi? 🧩
Un dambanemazwiNdicho mutambo wakagadzirwa nezvidimbu zvakasiyana uye zvakasiyana zvinofanirwa kunge zvakabatana kuti zvive zvakakwana, kazhinji chimiro, mepu kana mapikicha. Iwo mutambo wekare kwazvo. Pasina kupokana, imwe yeakanakisa hobho evana nevakuru. Uyezve, inobatsira mukusimudzira kweakateedzana ezvepfungwa zvepfungwa.
Asi chero munhu anofunga kuti dambanemazwi achangobva kugadzirwa haana kunaka. Sezvandambotaura, akura kwazvo. Uye, kutanga, kugadzirwa kwake kwaive kune chimwe chinangwa.
Kwakatangira iyo Puzzle ☝️
Kunyangwe vezvakaitika kare vasingakwanise kutaura kuti dambanemazwi rakaonekwa riini, pane dzidziso nezve kwayakatangira
Imwe yeinogamuchirwa ndeyekuti muChirungu muvezi wemifananidzo, John Spilsbury, akagadzira mutambo. Kune vadzidzi vake kuti vadzidze jogirafi, muna 1760 John akagadzira seti yezvidimbu nezvikamu zvepasi. Pamwe chete, ivo vakaumba mepu yenyika. Uchishandisa mapuranga emapuranga uye stilettos, Spilsbury akapa vadzidzi vake mafaro uye kudzidza.
Asi vamwe vanoti chirahwe chakagadzirwa nemaChinese. Tangram Icho chitoyi chekare muChina. Iine zvidimbu zvinomwe chete, asi zvinotendera kuumbwa kwemifananidzo yakawanda. Zvisinei, zvakatosiyana nezvirahwe zvatajaira.
Muchokwadi, mushure mekugadzirwa kweSpilsbury, dambanemazwi rakazove rakakurumbira. Ndokunge, zvakagadzirwa nemaoko, saka zvaidhura kwazvo. Aingova chete muRevolution Industrial (1760-1820 / 1840) kuti dambanemazwi rakachipa. Izvi imhaka yekuti kufambira mberi kwetekinoroji kweRevolution Vakapa maturusi aidiwa kugadzira toyi nekukurumidza uye yakachipa.
Munguva Yekuderera Kukuru (1929), iyo toyi yakasangana nemhepo mukugadzirwa. Paitove nepikicha yekuhaya masendi gumi paawa! Pamusoro pazvose, vanhu vaitsvaga kugutsikana uye kugutsikana kana vaitamba netoyi.
Kwakatangira izwi Puzzle
Izwi rekuti Puzzle (dambanemazwi muchiSpanish) inozivikanwa uye inoshandiswa pasi rese. Kwayakatangira ndiChirungu. Yaro etymological mudzi unobva kuLatin, kubva muchiLatin chiito ndichaisa ( zvinoreva put).
Maitiro ekugadzira dambanemazwi: Matipi
Sarudza dambanemazwi akakodzera
Iyo zera ratidziro pane kurongedza kunobatsira, asi haifanire kushandiswa senzira yakasarudzika. Uyezve funga kujairira kwemwana wako nemutambo uyu. Kana mwana asina ruzivo rwekare, ipa sarudzo kune mamodheru ane zvikamu zvishoma, kudzamara azvijairira.
Iva nenzvimbo yakakodzera yekumisikidza
Kamwe iyo dambanemazwi yatengwa, zvakakosha sarudza yakakodzera gadziriso yegungano. Zvichida, nzvimbo yacho inofanira kunge yakanyarara, uko pasina nzara inorema yevanhu.
Rangarira kuti chiitiko ichi chinoda kutarisisa kwakawanda uye kuti ruzha rwakanyanya kana kufamba kunogona kukanganisa. Uine izvo mupfungwa, zvakakodzera kusarudza kona yekamuri kana imwe imwe kamuri ine tafura hombe.
Zvakare, zvakakosha zvakanyanya kuti uve nemanzwiro uye usaparadzira zvidimbu nekukurumidza kana uchinge wasvika kumba, sezvo ivo vangangorasika, izvo zvinopedzisira zvichikonzera kushungurudzika. Fungidzira, mushure memazuva ekutsaurira, iwe uchaona kuti mufananidzo hauna kukwana.
Shandisa template semutungamiri
Kushandisa gwaro sereferenzi izano risingakwanise kufuratirwa. Kazhinji yenguva, iyo toyi pachayo inounza kubereka kwemufananidzo kuti uunganidzwe.
Chengetai iyi modhi isvike kune wese munhu arikubatsira negadziriro yegungano, kuti vagone kureva kwariri kana vaine mibvunzo. Muchiitiko ichocho, kutarisisa kune ruzivo kunogona kuita mutsauko uye nekukurumidza kupedzisa.
Tanga nemakona emakona
Zano redu rekupedzisira rine chekuita nekutsanangudza akanakisa musangano gungano, iro pacharo. Mupfungwa iyi, zvinokurudzirwa kutanga nemakona, ane zvidimbu zvine mativi akatwasuka. Nenzira iyi, unogona kuratidzira saizi yekupedzisira yemufananidzo.
Kana nhamba yezvidimbu yakakura kwazvo, chikuru pasi rose chinounza pamwe zvinonakidza Makumi zviuru makumi mana , block Assembly inogona zvakare kuve imwe nzira yakanaka, kunyanya kana paine vana vari kutora chikamu. Mumwe nemumwe wavo anogona kutora mutoro wezvidimbu zvidiki uyezve munhu mukuru anotora mutoro wekuzviisa pamwechete.
Inenge pedyo nemagumo, isu tinopa imwezve nhungamiro: kumanikidza kukwana pakati pezvidimbu maitiro asina basa. Paunoona kuti hazvisi zvinowirirana, tsvaga dzimwe nzira dzekuitira kuti usazvikuvadze.
Bhenefiti yekutamba mapuzzle😀
Iwe wakanyatsonzwa nezve iyo puzzle zvinobatsira. Nzira iyo iyi mhando yemutambo inomutsa huropi inonakidza uye inoguma yagadzira zviuru zvezvibereko zvevanhu vezera rakasiyana.
Kuunganidza zvidimbu zvidiki uye kugona kugadzira panoperera pakupedzisira ndeye kugona kugona kurovedza muviri kune vakwegura, vakuru, vechidiki uye vana, kunyanya avo vari muchikamu chedzidzo.
Kazhinji, dambanemazwi rakanakira ndangariro uye kana rikashandiswa muchikoro, kunyanya mukudzidza kwehucheche, rinobatsira zvikuru kudzidza. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve zvakanakira kushandisa chishandiso ichi kuchikoro, ndeipi mitemo yaro kana zvazvakanakira zvayinopa kune vanhu vanoda kuisa pamwechete dambanemazwi? Ramba uchiverenga.
1- Puzzle inokurudzira uropi
Yekutanga mupiro mukuru wepuzzle iri padanho rehungwaru, nekuti iyo dambanemazwi inomutsa uropi. Naizvozvo, iyo kukura kweunyanzvi hwekuziva irubatsiro rwakakura.
Chiitiko ichi chine chinongedzo chakanangana nekugona kwemwana kugadzirisa matambudziko, kuwedzera kufunga uye nekuvandudza hunyanzvi hwako. Zivo yenhamba, mavara, maumbirwo, mepu, nzvimbo, traffic, uye mamwe akawanda maseru eruzivo anogona kusimudzirwa.
2- Puzzle yakanaka kurangarira
Chimwe chinhu chakakosha pakushandisa dambanemazwi ndechekuti chakanakira memory . Uyu mupiro wakakosha kune vanhu vane matambudziko ane chekuita nekukanganwa.
Izvi zvinoitika, nekudaro, kuwana zvidimbu zvakakodzera kune yega yega kunoita kuti munhu aunganidze ruzivo nezve mafomati uye avo vanogona mapara. Unogona here kufungidzira kuisa ichi chiitiko kune vanhu vakuru vane matambudziko ekurangarira?
3- Puzzle inovandudza kufambisa mota
Kune chikamu chehucheche icho vana vadiki vanoda kukudziridza hunyanzvi hwavo hwemota. Maoko ake nezvigunwe zvichiri kusaziva madaro uye kugadziriswa kwezvinhu.
Naizvozvo, chirahwe chakanangana nevateereri ichi chinowanzoitika kukurudzira kufambisa mota kunyangwe muhucheche hudiki . Kuedza kukwana chidimbu chidiki kune chimwe kukurudzira kukuru kudzora mafambiro emaoko, maziso nemaoko.
Nekudaro, iyo dambanemazwi inofanirwa kuenderana nezera chairo remwana, riine hombe, riine mavara zvidimbu uye akareruka akaisa Izvo zvinoshandawo kune vanhu vakuru kana vanhu vakuru vane matambudziko ekubatanidza.
4- Puzzle rinokonzera kudyidzana
Nguva yechikoro chikamu chekugadzirisa chevana. Kuumbwa kweshamwari uye kuzivikanwa kwemapoka uye kufunga kwenzanga zvakakosha zvinangwa zvevana vechikoro.
Uye kuzadzisa ichi chinangwa, iyo dambanemazwi chinhu chakakura chishandiso chekushamwaridzana . Panguva yekutamba, vana vanogona kudyidzana, kubatana, kukwikwidza, kukunda, kuita nharo, kugovana kubudirira uye kutadza nekirasi yese.
5- Puzzle rinokurudzira kuona
Uyu mutambo unokurudzirawo maonero evana vechikoro. Unyanzvi hwekucherechedza, kuenzanisa, kuongorora pamwe nekuumbiridza mazano zvinhu izvo zvinoshanda mukudzidzisa kwemwana wega wega .
Iyi mibairo inowedzera mukuyaruka nekukura, ichive hunhu hunokosheswa zvakanyanya munzvimbo dzehunyanzvi. Iko kufunga kwemakambani makuru, emusika mikana inogona kuzvarwa muhudiki, iine akakodzera kukurudzira.
Pamusika, dambanemazwi rine shanduro dzinoverengeka. Uye zvakakosha kuyeuka kuti ivo vanogona kuve nematanho akasiyanasiyana uye kwete iwo chete akaiswa pane yakatwasuka pamusoro uye mune rimwe divi.
Mhando dzechinyakare dzemapuzzle ndidzo: Cube yaBedlam, Mashiripiti Cube, Sum Cube, Pentaminos uye Tangram. Tsvaga zvimwe zvakawanda nezve aya mamodheru ePuzzles:
Uyu mutambo une Zvimedu gumi nezvitatu zvinogadzira cube yakakwanaIcho chirahwe chakagadzirwa naBruce Bedlam. Pakazara, pane zvidimbu gumi nezvitatu zvakaumbwa nemacube. Pfungwa ndeyekuvaka cube 4 x 4 x 4 uye kuve neunyanzvi, nekuti dambudziko ndere kuwana imwe yedzinopfuura zviuru gumi nematanhatu nzira dzekuzviita.
Iyi vhezheni ndiyo inonyanya kufarirwa pakati pemapuzzle mu 3D fomati.
Iyo yemashiripiti cube ndeyekare kujairana kwedu. Zita rayo repamutemo ndiRubik's Cube, zita rinokudza muvambi waro, Ernő Rubik anobva kuHungary. Yakagadzirwa muna 1974 uye yakaberekwa yakakura - yakahwina Mutambo wegore. Ma1980s yaive mhedzisiro yeiyi puzzle, iyo ichiri yakapararira nanhasi.
Iwo polyethylene cubes ayo pamwechete anoita cube.
Urwu ndirwo rumwe rudzi rwechimuti chakavezwa-cube. Yakagadzirwa naPiet Hein, uyo akaigadzira mushure mekuenda kuquantum mechanics kirasi. Mutambo uyu unoshandisa nomwe polyethylene cubes ayo pamwe chete anogadzira cube 3 x 3 x 3. Zvidimbu izvi zvinoumba anopfuura maumbirwo egungano anosvika 240.
Iri dambanemazwi rine mativi mashanu akarongwa nenzira dzakasiyana. Pakazara pane mafomati gumi nemaviri ePentaminó. Iyi pikicha yakafuridzira Tetris kana Rampart mitambo yemakomputa. Uyu mutambo wakakurudzira mukurumbira Tetris.
El tangram Iine zvidimbu zvinomwe chete zvinogona kuumba zvinopfuura zviuru zvishanu.
Iyi ndiyo dambanemazwi kana jigsaw zvakanyanya zvechivanhu, zvichienzaniswa nemafomu anotengeswa nhasi. Akazvarwa kuChina aine zvidimbu zvinomwe uye pamwe chete zvinopa huwandu hwakawanda. Enisaikoropidhiya inosvika pakutaura kuti zvinokwanisika kutora zvinopfuura zviuru zvishanu. Pasina kupokana, kwaive kurudziro yemitambo yemapuzzle ine akakwana dhizaini nhasi.
El chikuru dambanemazwi anonzi "Keith Haring: zvakapetwa kaviri"Ine zvidimbu 32,256, zviyero zvingangoita 5.44mx 1.92m uye kuputira kwayo kunorema inoshamisa 17kg.
Kuburitswa kwemufananidzo "Kutendeuka"naJackson Pollock inoonekwa seimwe yemapuzzle akaomesesa kuiswa pamwechete.
Muna 1997, muPeru, boka remagandanga Movimento Revolucionario Tupac Amaru akapinda munzvimbo yekugara mumiriri weJapan, aine vanhu vanopfuura makumi manomwe nenomwe vakasungwa uye vakanetswa nhaurirano, vakakumbira Zviuru zviviri zvidhori. Izvi zvaiitirwa kuti vakasungwa vagone kuve nechido chekutandarira uye vasanetseke nekutaurirana.
Muna 1933, mapuzzle vakatanga kuva makadhibhokisi. Zvizhinji zvezvose, zvakaita kuti ive yakachipa, yakatogadzira kutengesa kweanosvika mamirioni gumi pasvondo!